အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးဆိုတာဘယ်ပဝေသဏီကတည်းကရှိနေလားမရှိလားမသိပါ။သို့သော်လူတွေ 1989-90 လောက်မှစသိခဲ့ကြ တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာသန်း 350 လောက်လူတွေမှာစီပိုးတွေ့နေတယ်လို့ အသည်းဆရာကြီးတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာတွေ့လိုက်တယ်…..
လူတွေကကိုယ်မှာဘဲမရှိသလိုလိုနှင့်ဆေးစစ်ဘို့ကြတော့ကြောက်လန့်နေကြတယ်။လူသန်း 350 မှာစီပိုးတွေ့နေတာအရေးမကြီးပါ။မနေ့တစ် နေ့ကမှအဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကျနော့်ကိုကျနော်အရမ်းစိတ်ပျက်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျနော့်မိသားစုတစ်ခုလုံးတစ်နှစ်တစ်ခါဆေးစစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ကျမှကျနော့အသည်းထဲမှာစီပိုးတွေ့ခဲ့တယ်။မိသားစုတစ်ခုလုံးအခြေအနေကောင်းပါသည်။
…………ရှင်နှော်…ကိုဂျစ်တို့ရုံးခန်းကို ခဏခဏ မသွားနဲ့……..သူ့မှာစီဖြစ်နေပြီ အေအဆင့်တောင်ဆေးမရှိတာ….
မိန်းမစကားဘဲနားထောင်တာလား၊ ကျန်းမာရေးအသိနဲတာလားကျနော်မပြောတတ်ပါ။ကျနော့်သူငယ်ချင်းကျနော်ဆီအလာကျဲသွားတာ အမှန်ပါ။ကျနော့်သူငယ်ချင်းကကျနော့်ဆီကိုသာမရောက်တာပါ။ကာရာအိုကေခန်းနှင့်အနှိပ်ခန်းကိုပုံမှန်ရောက်နေကျ…….
ဘီပိုးကကူးရတာလွယ်ပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်။ကျနော်တို့ဆီကလူတွေဟာကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့သတိမရကြပါ။ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးနဲ့ဈေးဝယ်ထွက် နေကြပေမယ့်လည်းဒီခေတ်ငွေငါးထောင်တစ်သောင်းလောက်ရှိတဲ့ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးမထိုးဖြစ်ကြပါ။ ကိုယ်တိုင်လဲမထိုးသလိုကိုယ့် သားသမီးကိုယ့်မိသားစုကိုလည်းဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့သတိလည်းမပေးကြပါ။မေ့နေတာလား မပြောတတ်ပါ။ ကျနော့်မိသားစုကဘီပိုးကာကွယ်ဆေး တစ်လုံးသုံးသောင်းကျော်ပေးနေရတဲ့ အချိန်ကတည်းကထိုးခဲ့ကြပါသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးကျတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိပါ။သို့သော်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သောစီပိုးသတ်ဆေးတွေရှိပါသည်။ ဆေးဘိုးက ဈေးတော်တော်များပါသည်။ဒိပြင်ဆေးထိုးပြီးခံစားရတဲ့ဝေဒနာကလည်းမသက်သာပါ။ဒါပေမဲ့အရင်ကထက်စာရင်ကု သမှုပိုထိရောက်လာပါ တယ်။ရောဂါပျောက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းများလာနေပါပြီ……….
ကျနော်ပုံမှန်ဆေးစစ်ချက်မှာစီပိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ့စတစ် ပြနေပါတယ်။ဆေးခန်းနောက်တစ်ခန်းမှာထပ်စစ်ပြန်ပါသည်။ ဆေးခန်းတစ်ခုတည်းကအဖြေကိုမယုံသင့်ဘူးလို့ကျနော့်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါတယ်။
နောက်ဓါတ်ခွဲခန်းမှာလည်းပေါ့စတစ်ပြနေတော့ကျနော့်သွေးထဲမှာစီပိုးရှိနေတာသေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ… ဒါဆိုရင်ကျနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနှင့်သွားပြရတော့မည်။ကျနော်ဆရာဦးဝင်းနိုင်နှင့်သွားပြဖြစ်ပါသည်။ဆရာမှတ်ချက်နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစီပိုးကောင်ရေနှင့်စီပိုးအမျိုးအစားစစ်ဆေးရပါတယ်။
စီပိုးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါပိုးကောင်ရေ (RNA) နှင့်စီပိုးအမျိုးအစား ( genotype) ကအရေးကြီးပါသည်။ပိုးကောင်ရေနှစ်သန်းလောက်ဆိုရင် ကုသရလွယ်ကူပြီးနှစ်သန်းအထက်ဆိုရင်ကုသရခက်ပါသည်။စီပိုးအမျိုးအစား(genotype)ကိုကျနော်နားလည်သလိုရှင်းပြပါမည်။
Type 1 အမျိုးအစားတစ်က ဥရောပ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်မှာအဖြစ်များပါတယ်။ကုသမှုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် 48လုံးထိုးရပါမယ်…… ပျောက်ကင်းမှုနှုန်းက 80% လောက်ရှိလာပါပြီ်။အရင်က50%ဘဲရှိတယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။
အမျိုးအစားနှစ်နှင့်သုံး (type 2,3) ကအာရှမှာအဖြစ်များပါတယ်။တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် 24 လုံး(ခြောက်လဆေးထိုးရပါတယ်) ဒီအမျိုးအစားကရာနှုန်းပြည့်နီးပါးပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။တစ်ချို့အမျိုးအစားကတစ်လည်းမဟုတ်၊နှစ်လည်းမဟုတ်၊သုံးလည်း မဟုတ်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးအစားကိုတော့အမျိုးအစားတစ်အတိုင်းတစ်နှစ်ဆေးထိုးရပါတယ်။ အမျိုးအစားတိတိကျကျမခွဲခြားနိုင်လို့ပျောက်ကင်းမှုနှုန်းဟာနိမ့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ကျနော့်သွေးနမူနာကိုနာမည်ကြီးဓါတ်ခွဲခန်းမှတဆင့် S’pore သို့ပို့ပြီးစစ်ဆေးစေပါတယ်။ အဖြေကိုတစ်ပတ်စောင့်ရပါတယ်။ သွေးစစ်ဆေးမှုအတွက်ကုန်ကျငွေကနဲနဲများပါတယ်။သွေးအဖြေကိုကြည့်ပြီးမှကုသမှုကစတင်နိုင်မှာပါ။
သွေးစစ်ချက်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ဘဲစောင့်နေပါတယ်။ကျနော်ဟာအာရှမှာနေတဲ့သူမိုံလို့ Type 2,3 ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။
……..ပိုးကောင်ရေ4သန်းကျော် genotype One …….
ဥရောပ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်မှာအဖြစ်များတဲ့ type one ကကျနော့်ဆီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ…..
ဆရာဦးဝင်းနိုင်က Pegasys (peginterferon alfa-2a ) တစ်ပတ်တစ်လုံးနှုန်းနှင့် 48 ကြိမ်ထိုးရန် Revavirin 200mg ဆေးကိုမနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် တခါသောက်လျှင်သုံးလုံးစီသောက်ရန်ညွန်ကြားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဓါတ်ကျစရာမလိုတဲ့အကြောင်းအားပေးစကားတွေလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆေးကိုစနေနေ့ညမှာဘဲထိုးဘို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ဆေးထိုးအပြီးအိပ်ဆေးသောက်ပြီးအိပ်လိုက်ခြင်း ဖြင့်ဆေး ရဲ့ Effectခံစားမှုတွေ သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးထိုးအပြီးဆေး Effect ကသုံးနာရီလောက်မှာပြသလေ့ရှိပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာတွေ၊ကိုယ်လက်နာတဲ့ပုံစံမျိုး တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ စနေနေ့ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်တနင်္ဂနွေအလုပ်နားရက်မှာသက်သက် သာသာနှင့်ကိုယ့်အိမ်မှာနား လို့ရပါတယ်။ဒီလိုနှင့်ဘဲကျနော်ဆေးစထိုးဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်။
ဆေးစထိုးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်းကျနော့်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကျနော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆေး တွေပိုကောင်းတဲ့ကုသနည်းတွေရှိမလားလို့ကျနော်စုံစမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းချင်တော့ Net မှာသိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို ကျနော်အကြံတောင်းကြည့်ပါတယ်။
ကျနော့်ဆေးစစ်ချက်၊ထိုးနေတဲ့ဆေး၊စားနေတဲ့ဆေး တွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူကအမေရိကားကဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်ဘယ်မှာကုရင်ကောင်းမလဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဘန်ကောက်၊စင်ကာပူ၊တရုတ်၊ဟောင်ကောင်၊မလေးရှား၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာကုရင်ကောင်းမလဲကျနော်မေးမြန်းလိုက်တာပါ။
သူသေသေချာချာစုံစမ်းပြီးအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျနော့်ကိုကုသနေတဲ့နည်းစနစ်ဟာ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်မှမသွားဘဲကိုယ်အိမ်မှာဘဲကုတာအကောင်းဆုံးတဲ့……..
Pegasys ဆေးဟာ ၀မ်းဗိုက်ချက်ပတ်လည်အရေပြားအောက်အဆီထဲကိုထိုးရပါတယ်၊၀မ်းဗိုက်ကအရေပြားကိုစုဆွဲပြီးအရေပြားအောက် ကိုထိုးလိုက်တာပါ။
တိကျတဲ့လက်တွေ့တစ်ခုပြပါဆိုတော့သူတိတိကျကျမပြောနိုင်။ဒါပေမယ့်သူကဆေးကိုဝယ်သောက်ကြည့်ပါ၊ ထူးကိုထူးရမယ်လို့ဘဲပြောနေတယ်။သူပြောသလိုထူးတော့ထူးမယ်။ကျနော်ပစ္စည်းဥစ္စာဓနတွေသူ့ကုမ္ပဏီထဲရောက်ကုန်မှာကိုကျနော် ကြိုသိနေတယ်။ကျနော်တရုတ်တိုင်ရင်းဆေးတွေကိုလည်းမသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။လက်တွေ့သမားဖြစ်သောကျနော်တိတိကျကျအဖြေမရှိသောရမ်း ကုဆေးမျိုး ကိုဘယ်တော့မှလက်မခံခဲ့ပါ။
Pagasys ဆေးထိုးရင်တစ်နှစ်ဆိုရင်ပျောက်နိူင်တယ်၊တစ်လုံးဆေးဘိုး USD 215 ကျသည်၊တစ်နှစ်အတွက်USD 10320 ကုန်ကျမည် ။ကုန်ကျငွေကိုတော့ကိုယ့်အင်အားနဲ့ချင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ။အားလုံးကိုကျနော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးဖြစ်ခဲ့ ၍လက်တွေ့ကျကျအဖြေမပေးနိုင်သောတိုင်းရင်းဆေးတွေကိုရှောင်ကြပါ။အထူးသဖြင့်တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်သောလင်ဇီးနှင့်ပို လန်ဆေးကိုရှောင်ကြပါလို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ဒီဆေးတွေကအရမ်းဈေးများသလိုအပြောကောင်းအဆွယ်ကောင်းတဲ့
10 နှစ် 15 နှစ်လောက်ကြာမှ အသည်းခြောက်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ထပ် 10 နှစ်လောက်ကြာမှအသည်းကင်
15 နှစ် 20 လောက်မှလူကိုဒုက္ခပေးတာပါ။တစ်ချို့ကျတော့လည်းအသည်းကင်ဆာလည်းမဖြစ်၊အသည်း
တချို့လူတွေကျတော့အသက်ငါးဆယ်မှာစီပိုးတွေွ့တာမကုတော့ဘူးတဲ့။စီပိုးဟာနောက် 15 နှစ်
မှဒုက္ခပေးတာလူ့သက်တမ်း 65 နှစ်မှာစီပိုးနဲ့မသေလည်းအခြားရောဂါတစ်ခုနှင့်သေမှာဘဲဆိုပြီးမကုတော့တဲ့
နောက်တစ်ယောက်ကအသက် 60 မှာစီပိုးတွေ့ပြီးဆေးထိုးနေပါတယ်။သူ့ခံယူချက်ကိုမေးကြည့်တော့သူ
စီပိုးရှိနေတဲ့သူတွေဟာအရက်နှင့်ဆေးလိပ်ကိုလုံးဝ လုံးဝ ရှောင်သင့်ပါတယ်။စီပိုးနှင့်အရက်ဟာမတည့်
စီပိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့…….သေသေချာချာလေ့လာကြည့်လိုက်တော့တစ်ကျောင်းလုံးဟာသင်တုန်းဓါးတစ်ချောင်း တည်းကိုအသုံး ပြုပြီးကိုယ်တော်တစ်ပါးပြီးတစ်ပါးခေါင်းရိတ်ပေးခဲ့လို့ဆိုတာသိရပါတယ်။
စီပိုးဟာလိင်ဆက်ဆံရာမှမကူးစက်နိုင်လို့အမေရိကန်အသည်းကောင်စီမှဆိုထားပါသည်။ဒါပေမယ့်အထူးသတိပြုစရာတွေကို ကျနော်ပြောပြချင်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံရာမှနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အင်္ဂါမှာပွန်းပဲ့ရာကြောင့်သွေးတွေထွက်ခဲ့ရင်ကူးစက်နိုင် ပါသည်။စီပိုးရှိနေသောအမျိုးသမီးရာသီလာချိန်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်။